Importlọ ọrụ China na-ebubata ma na-ebufe ihe ngosi (Canton Fair) ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngwa ahịa websaịtị ndị ahịa na ndị na-eweta ahịa | Huaihai Holding Group
Companylọ ọrụ anyị, Huaihai Holding Group bụ onye nrụpụta na - eme ka ihe dị na ụlọ ọrụ ụgbọ ala mini, n'ime afọ 44 gara aga anyị na-ejide inye ndị mmadụ nsogbu dị iche iche n'ọgbọ dị iche iche, klaasị na mba dị iche iche. Site kwa n’oge gara aga, anyị na-eche banyere otu esi eme ka ndị agadi na-akwọ ụgbọala n’enweghị nsogbu na nkasi obi. Nke ahụ bụ isiokwu anyị taa.
N'oge ugbu a, ọnụ ọgụgụ ndị agadi na-aghọ nnukwu nsogbu n'ụwa niile. Dabere na nyocha sitere na ịntanetị, ka ọ na-erule afọ 2018, ọnụ ọgụgụ ndị gafere afọ 65 bụ 8.5% nke ndị niile nọ n'ụwa. A na-atụkwa anya na ka ọ na-erule afọ 2050, ọnụ ọgụgụ a ga-abawanye ruo 17%. Na Europe naNorth America, a ga-enwe ihe karịrị 25% nke ndị gbara afọ 65, ọ pụtara na mmadụ anọ ọ bụla ị nwere ike izute otu "agadi nwoke".ListCanton Fair na ntanetị
Onu ogugu agbanweela ubochi ndu anyi ma weta otutu nsogbu ndi ozo. N’ọtụtụ mba, a ga-akagbu ndị gafere afọ iri isii na ise na-akwọ ụgbọala ịnya ụgbọ ala ma ọ bụrụ na ha agafeghị kwa afọ. Ọzọkwa ọ dị ize ndụ nye ndị agadi ịnya ọgba tum tum ma ọ bụ ọgba tum tum Electric n'okporo ụzọ, ma ihe gbasara njem ọha na oge anaghị adaba adaba. Yabụ na ọ bụ isi ọwụwa ka ndị agadi pụọ. Na ntinye a, anyi choro olile anya inye anyi osisa. Anyị na-adụ ndị agadi ndụmọdụ ka ha na-akwọ ụgbọala eletrik eletrik iji dozie nsogbu njem ha. N'akụkụ m bụ otu n'ime ụdị anyị gosipụtara, anyị nwere ike ile anya.Canton Fair Buyer
N’ihi eletrik tricycleadabara ndị agadi? Echere m na enwere ọ dịkarịa ala nnukwu ihe atọ. Nke mbu,tricycle dị mma. N'ime nhazi ọ ka kwụsie ike karịa wiil abụọ, anyị wepụtara ọsọ ọsọ na 25 km / h, nke adịghị ngwa ngwa ma ọ dị mma maka ndị agadi. Nke abuo, tricycle nwere nkasi obi kariri mgbe i na-anya ugbo ala. Anyị na-eji oche oche dị elu dị elu maka oche ọkwọ ụgbọ ala na oche ndị njem. Ọ dịghị mfe ịda mba ọbụlagodi ịnya ụgbọ ala ruo ọtụtụ awa. Nke ato, tricycle a nwere nke pere mpe, ọ ga-adị 8 ụkwụ n’ogologo, 3.4 ụkwụ n’obosara. Ọ ga-amasị gị mgbe ị na-anya ụgbọala n'okporo ụzọ mmadụ juru.Fada Canton Online
Dị ka anyị maara, moto bụ isi nke ugboala. Nke atricycle akwadoro 60V1000W moto, anyi na eji akara akara mbu, o nwere oru nke ibu na ebido, nzaghachi ike ike, ikike di egwu, oke olu, oru oma, ogologo ndu. Ike ya kachasị elu ruru 2200W, na-enye ọsọ ọsọ 30km / h, nke ahụ ezuola ndị agadi ịnya ụgbọ ala.
Akụkụ nke abụọ dị mkpa bụ onye njikwa, onye na-achịkwa anyị nwere nrụpụta dị elu, enweghị jelie malite, ike karịrị akarị, nchedo volta dị ala. Ọ nwere ọrụ nyocha onwe ya: ike nyocha onwe ya na-arụ ọrụ na nyocha nyocha onwe ya. Ọ bụrụhaala na onye njikwa ahụ dị na steeti ike, ọ ga-achọpụta steeti interface ozugbo metụtara ya, dịka atụgharị aka, breeki aka ma ọ bụ mgba ọkụ ndị ọzọ na mpụga, wdg N'ọnọdụ nke ọdịda, onye njikwa ahụ ga-emejuputa nchedo na akpaghị aka. nchekwa nke ịnya igwe.
Nke ato bu anyigba nke azu anyi, anyi n’acho ihe ndi n’eweputa ihe nke oma nke ndi n’ereghari ahihia, a na-eji usoro ikpochapu otutu okpomoku eme ka ogha n’agha. Mgbapụta ọkwa P5 na-ahụ maka ịdị mma nke sistemụ nnyefe anyị mere ya onwe anyị, eriri anyụike:φ56mm, ọkpụrụkpụ ya bụ 3.5mm.Canton Fair Buyer